पीएचसीए खुला सूर्योदय बास्केटबल भोलिदेखि - kageshworikhabar.com
२९ पुस, काठमाण्डौ। सूर्योदय एजुकेसन फाउन्डेशनको आयोजनामा प्रथम पीएचसीए खुला एसइइ थ्री अन थ्री बास्केटबल प्रतियोगिता बिहीबारदेखि सुरु हुँदैछ ।
प्रतियोगितामा ब्वाइजमा ३२ र गल्र्समा १६ गरी जम्मा ४८ टिमको सहभागिता रहने आयोजक फाउन्डेसनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
दुवै समूहमा नगद पुरस्कार राखिएको छ । ब्वाइजमा पहिलो हुनेले २० हजार, दोश्रोले १० हजार र तेश्रोले ५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । गल्र्समा शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः १५ हजार, ८ हजार र ४ हजार नगद पुरस्कार जित्ने छन् । ब्वाइज÷गल्र्स दुवैमा ‘मोस्ट भेलुएबल प्लेयर’ र सर्वाधिक स्कोरकर्ताको पुरस्कार राशी भने समान रहेको छ । सोको विजेताले जनही २ हजार नगद पुरस्कार पाउने छन् ।
Previous articleआज कति थपिए काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमित ?
Next articleपछिल्लो २४ घण्टा यता कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए ?
प्रधानमन्त्री कपमा आज पनि दुई वटा खेल हुँदै